Ny Minisitry ny Raharaham-bahiny dia nanasongadina ny fitakiana ireo nosy malagasy sy ny fiatrehana ny ady atao amin’ny Covid-19 ary ny fampodiana ireo malagasy tavela any ivelany. Ny Minisitry ny Atitany dia namintina ny asa notanterahany ho teza miisa enina ka anisan` izany ny tantsoroka tamin’ny fifidianana tamin’ny taona 2019, ny fisinjaram-pahefana amin’ny alalan’ny fametrahana ny Governoram-paritra, « permis biométrique » hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena... Ho an` ny minisitry ny Indostria indray dia Ho vaindohan-draharaha ny fandrindrana ny fitsinjovana ny sehatra tsy miankina, ny zon’ny mpanjifa ary ny famoronana asa mendrika. Momba ny famokarana ny artemisia manokana dia efa miara-miasa amin’ny Minisitry ny Fambolena sy ny Minisitry ny Tontolo Iainana ny ministera iandraiketany. Ny Minisitry ny Fambolena, Fiompiana ary Jono izay namerimberina ny tanjona dia ny fahavitan-tena ara-tsakafo, isan’ny lehibe amin’izany ny famokaram-bary. Ny Minisitry ny Toe-karena sy ny fitantanam-bola no namarana ny tatitra.